जब प्रकाश एक पंथ उत्पादन देखिन्छ, यो अनिवार्य धेरै Parodies पछि पुस्तक वा फिलिम, हुन। तिनीहरूलाई केही पूर्ण बेकारी, अन्य उल्लेखनीय दर्शक छन्। यस लेखमा हामी तपाईंलाई प्रसिद्ध "Harry Potter" को खुट्टाोडी बारेमा भन्नेछु।
Maykl Gerber - यो प्रशंसित खुट्टाोडी को लेखक
"बैरी trotter" - बारे पुस्तकहरु को श्रृंखला को एक खुट्टाोडी Harry Potter। लेखक मात्र होइन पुस्तकको षड्यन्त्र पिटे, तर पनि मुख्य पात्र संग धुन मा नाम गरे। हाल, को श्रृंखला तीन किताबहरु, भनिन्छ पहिलो जो समावेश "बैरी trotter र निर्लज्ज खुट्टाोडी।"
एक func ओब्जेक्ट
खुट्टाोडी "बैरी trotter" हदसम्म शब्द-प्ले मा आधारित छ। "सुँगुरहरु 'trotters" - उदाहरणका लागि, "बैरी" को protagonist को नाम "सुन्दर", र आफ्नो नाम अनुवाद गरिएको छ। उहाँले हैरी अध्ययन जहाँ स्कूल नै, जो शाब्दिक अनुवाद "slop" अर्थ Hryugvarts, मा Hogwarts गरियो। तर निर्देशक Alpus Dolbimdur अर्थ "हरुवा।" मुख्य खलनायक को अनुयायीहरू आफूलाई zemleedami कल। मानिन्छ आफ्नो भक्ति को एक चिन्ह पृथ्वी खान बाध्य।
निस्सन्देह, प्रसिद्ध दन्तिये लगभग सबै प्रशंसक एक fanfic रुचि छैन। तर यो लेखक एक मजाक चाहन्थे, वा किताबहरू बिक्री गरेर केही पैसा बनाउन टिप्पण लायक छ। वा दुवै। कुनै पनि अवस्थामा, बैरी trotter र Harry Potter - दुई पूर्ण बिभिन्न कामहरू छन्। र मूल कुनै विचार, कुनै कथा सम्म छैन स्पष्ट खुट्टाोडी।
बैरी trotter र फिल्म बारे किताब
यसको लोकप्रियता को कारण, बैरी धेरै म चाहन्थे रूपमा स्कूल जान सक्छ। उद्गार र प्रश्न चिह्न को रूप मा आफ्नो निधारमा खत मा बाल्यकाल देखि। तर सबै कुरा रलिन्स पत्रकार (जेके Rowling को नाम संग धुन मा) बैरी trotter बारेमा फिलिम को आसन्न जारी बारेमा लेख लेख्न सुरु गर्दा परिवर्तन। उपन्यास बैरी trotter र प्रभु Votobormot विभिन्न हास्य परिस्थिति फस्न गर्दा absurdity को बिन्दु, गर्न आउँछ।
पुस्तक स्कूल explodes को अन्त मा, आफ्नो टुकडे फिल्म को प्रशंसक बेचिन्छ, र पैसा एउटा नयाँ स्कूल उन्नति गराउँछ, तर आधुनिक फारममा। स्कूल नयाँ निर्देशक - बैरी गरेको प्रेमिका आफ्नो पत्नी भइन्, र Lon चढेका। यो बैरी trotter द्वारा लिखित थिए भने यसलाई प्रदर्शन छ पुस्तकहरू अन्तमा। दोस्रो पुस्तकमा लोकप्रिय टिभी श्रृंखला "डाक्टर कसले" एउटा सानो सन्दर्भ समावेश गर्दछ।
मा रूसी मात्र पहिलो दुई पुस्तकहरू अनुवाद गरेका थिए। कारण रूसी भाषा मा पहिलो दुई कम लोकप्रियता गर्न "बैरी trotter र मृत घोडा" को तेस्रो पुस्तक अनुवाद छ, र पनि अधिक त प्रकाशित भएको थियो र बिक्री को लागि थिएन।
प्रारम्भिक 2002 मा, यो शायद, बैरी trotter बारेमा पहिलो पुस्तक को षड्यन्त्र तिनीहरूले रुचि उत्पादकहरु हुन् खिच्नुभयो हुनेछ, कि रिपोर्ट थियो। शायद, यस्तो गति तस्वीर पैसा धेरै र यसका लेखक को लोकप्रियता ल्याए थियो, तर पुस्तक अझै खिच्नुभयो छैन।
साहित्यिक चोरी को आरोप
धेरै प्रमुख प्रकाशक बारेमा माइकल Gerber बैरी trotter पुस्तकहरू प्रकाशित गर्न इन्कार गरे। यो साहित्यिक चोरी को वकील लेखक Rouling Dzhoan भाग मा सतावटको आफ्नो डर गर्न मुख्यतया कारण थियो। फलस्वरूप, लेखक आफ्नै खर्च मा पुस्तक प्रकाशित गर्ने निर्णय गरे। र यो fanfic पचास भन्दा बढी हजार प्रतिहरू लेट 2002 मा बेचिएको थियो। लामो साहित्यिक आलोचकहरु वकील को परीक्षा पछि साहित्यिक चोरी लागि अदालत मा एक मुद्दा फाइल परित्याग गर्ने निर्णय गरे।
गोर्की, "Danko को कथा": सारांश
सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक गुप्तचरहरू: पुस्तक
एक सारांश लेख्न प्रयास। "तिनजनासशस्त्रसिपाही" - एक मात्रा बारेमा छोटो उपन्यास
रूसी महाकाव्य: एक formidable हतियार बुलबुल डाकू
हाइकु - यो के हो? हाइकु र संरचना को इतिहास
धूम्रपान चिकन संग सलाद - कुनै पनि छुट्टी मा स्वादिष्ट।
मौरीले जस्तै आफ्नो बाटो घर फेला पार्न? धेरै साधारण संस्करण
Shostakovich Maksim Dmitrievich: एक जीवनी, रचनात्मकता
"Amr" - अस्पताल (Gagra): बाँकी र उपचार
को महसुल "यो सरल छ" ( "मेघाफोन"): समीक्षा र विवरण
हनीको साथ चाय - व्यंजनहरू
Snowdrop angustifolia: विवरण